Xog: Khilaaf ka dhashay duullaanka ay wadaan Ciidamada DF & AMISOM (Aqriso sababta) |
Xog: Khilaaf ka dhashay duullaanka ay wadaan Ciidamada DF & AMISOM (Aqriso sababta)
cheap tadalafil, cheap dapoxetine. Wararka aan ka heleyno magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada, ayaa sheegaya in Khilaaf xoogan uu ka dhex curtay Saraakiisha hogaamineysa Ciidamada DF iyo kuwa AMISOM ee maalmo ka hor qabsaday Degmada Baraawe.
Wararku waxa ay sheegayaan in Saraakiisha iyo Ciidamada DF ay u ruqaansadeen Deegaano daris la ah Baraawe oo ay ku sugan yihiin Alshabaab, halka Saraakiisha iyo Ciidamada AMISOM ay ka hareen qaadista duullaankaasi.
C/naasir Axmed oo kamid ah Ciidamada Commandos-ka DF ee ku sugan Degmada Baraawe, ayaa inoo xaqiijiyay in Ciidamada DF Somalia ay u ruqaansadeen dhanka Deegaanka Sablaale, balse ay ka hareen kuwa AMISOM, kadib markii ay ka biyo diideen in weerar lagu qaado goobaha harsan.
Abaanduulaha ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cabdirisaaq Khaliif Cilmi, ayaa sheegay in Ciidamada Dowladu aysan hakin doonin Duullaanka ay kula jirto Alshabaab inta ay Ciidamadu gacanta kaga dhigayaan gabi ahaan Deegaanada ku xeen-daaban Baraawe iyo Gobolada Harsan, waxa uuna Tilmaamay in wararka sheegaya in AMISOM ay hari doonto haddii ay dhaqaaqan Ciidamada DF uusan ahaan doonin mid lumisa kaalinta Ciidamada Dowlada, balse ay horay usii socon doonaan.
Abaanduulaha ayaa tilmaamay inuu neefsan doono goortii ay Ciidamadiisu gacanta ku dhigaan Deegaanka Sablaale oo iminka ah xarunta ugu weyn Maleeshiyada.
Guddoomiyaha Maamulka Dowladda ee Degmadda Baraawe, Shaacir Aadan Cilmi ayaa isna shaaciyay in Ciidamada DFS ay dhexda xirteen, islamarkaana aysan u joogsan doonin wararka kasoo yeeraya Saraakiisha Ciidamada AMISOM ee ku aadan in la hakiyo Dagaalka.
Waxa uu farta ku goday in AMISOM ay dalka u joogto xoreynta goobaha Alshabaab ay gacanta ku hayaan, balse aysan awood u laheyn inay hakiso dagaal heer gabogabo ah oo lagula jiro Maleeshiyada Alshabaab.
Dhanka kale, Taliyaha ciidanka Milatariga ee AMISOM Silis Ntaguru, ayaa dhankiisa ka sheegay in Ciidamada AMISOM ay ku nagaan doonaan Degmada Baraawe inta ay kala jaan-qaadayaan Jawiga, waxa uuna sheegay in duullaanka uu hakat galaayo ilaa laga qiimeeyo jihooyinka ay Ciidamadu ku duulayaan.